Faahfaahino ka soo baxaya Weerar uu ka badbaaday Duqa Magaalada Boosaaso | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Faahfaahino ka soo baxaya Weerar uu ka badbaaday Duqa Magaalada ...
Faahfaahino ka soo baxaya Weerar uu ka badbaaday Duqa Magaalada Boosaaso
Faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar xoogan oo la damacsanaa in lagu qaado hoyga duqa degmada boosaaso cabdi salaan bashiir cabdisalaan wererkaasi oo ay fashiliyeen ciidamada ilaalada guriga duqa boosaaso.
Weerarkaan ayaa waxa la tilmaamay in ay doonayeen in ay qaadan xubno ka tirsan kooxda daacish,Waxaana la sheegay in iska hor imaad uu dhexmaray ciidamada ilaalada guriga duqa boosaaso iyo kooxdii weerarka damacsaneyd islamarkaasna uu ka dhashay qasaare kala duwan.
Saraakiisha taliska ciidanka booliska puntland ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen hal ruux oo ka tirsan kooxdii weerarka damacsana islamarkasna waxa ay tilmaameen in ay goobta iska baxsadeen intii kale.
Waxaana la sheegay in isbitaal loo qaaday ninkii ay nolasha ku qabteen ee dhawaca ahaa,wararka hoose ayaa sheegaya in ruuxaasi la qabtay uu isku dayay in uu baxsado balse aysan usuurtagalin.
xaaalada ayaa hadda aha mid degan waxana la soo warinayaa in laama amaanka ay ku raadjoogaan koox kale oo weli ku dhuumayesaneyso Boosaaso.
Maqaal horeDibadbax lagu tageerayo Nabi Maxamed NNKH loogana soo horjeedo Faranciiska oo ka socda Muqdisho
Maqaal XigaDegdeg:Fanan Qamar Suugaani oo la Xukumay Kadib markii dhawan laga qabtay Berbera